နှားနှဈဖှားမြား (၁၉၂၅၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၂၁) အတှကျ ဟောစာတမျး - Barnyar Barnyar
February 23, 2022 Astrology 0
နှားနှဈသညျတရုတျရိုးရာရာသီခှငျထဲတှငျ ဒုတိယမွောကျသောနှဈဖှားမြားဖွဈလသေညျ။ နှားနှဈဖှားမြားသညျ အလုပျမြားကို ကွိုးစားလုပျကိုငျရပွီး ဉာဏျရညျထကျမွကျသျောလညျး ဘယျသောအခါမှ ခြီးကြူးခွငျးကို မခံရပေ။
တရုတျယဉျကြေးမှုတှငျ နှားသညျတနျဖိုးရှိသော တိရိစ်ဆာနျဖွဈပွီး စိုကျပြိုးရေးတှငျ အလုပျကွိုးစားပွီး ရိုးသားခွငျး စသော ဝိသသေလက်ခဏာမြားကိုပိုငျဆိုငျသညျ။
ကံကောငျးစသေောအရောငျ – အပွာ၊ အဝါ၊ အစိမျး, ကံကောငျးစသေောနံပါတျ – ၁၊ ၄
ကံကောငျးစသေောပနျး – ကွာပနျး, ကုသိုလျပွုလုပျရနျကောငျးသောအရပျ – အရှရေ့ပျ၊ အရှတေ့ောငျအရပျ
ကွှယျဝခမျြးသာစသေောအရပျ – အနောကျမွောကျ, အခဈြကံကောငျးသောအရပျ – တောငျအရပျ
ကံမကောငျးစသေောအရောငျ – အနီရောငျ၊ အညိုရောငျ, ကံမကောငျးစသေောနံပါတျ – ၃၊၆
နှားမြားအတှကျ အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျမြား နှားမြားသညျ မိသားစုတဈစုနှငျ့ အတူတူ အလုပျလုပျလရှေိ့သညျ။ သူတို့သညျ ရရှေညျနှငျ့ တညျငွိမျသောအလုပျကို ရှာဖှကွေသညျ။ နှားနှဈဖှားမြား၏ ပငျကိုယျစရိုကျအရညျအသှေးမြားကွောငျ့ တညျငွိမျသောအလုပျသညျ သူတို့အတှကျအကောငျးဆုံးဖွဈလိမျ့မညျ။
သူတို့သညျ ကိုယျလုပျသညျ့အလုပျအပျေါ ခိုငျမာသော တာဝနျသိစိတျရှိခွငျးကွောငျ့ ကောငျးမှနျသောရလဒျ ကိုခံစားရနိုငျသညျ။ နှားနှဈဖှားမြားတှငျ ဆရာဝနျမြား၊ ရှနေ့မြေား၊ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားနှငျ့ ကြောငျးဆရာမြားအဖွဈမြားသညျ။ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြမှုနှငျ့ ကွိုးပနျးအားထုပျမှုမြားကွောငျ့ အသိမှတျပွူခွငျးကိုခံရသညျ။
လယျကှငျးထဲတှငျ လှတျလှတျလပျလပျ ပွေးလှားနသေော နှားမြားကဲ့သို့ပငျ နှားနှဈသညျ ကနျြးမာ၍ ကွံ့ခိုငျသညျ။ ဆေးရုံသို့လာရောကျလညျပတျမှုမှာ ရှားပါးသျောလညျး၊ တဈခါတဈရံတှငျ ၎င်းငျးသညျ ယုံကွညျမှုလှနျကဲမှုကို ဖွဈစသေညျ။ ငယျရှယျစဉျကာလတှငျ လဈလြူရှုခွငျးသညျ နောငျနှဈမြားတှငျ ပွဿနာမြား ဖွဈပျေါလာသညျ။
အလုပျအပျေါအရမျးအားရုံစူးစိုကျမှုမြားသဖွငျ့ တဈခါတဈရံအစားအသောကျကိုပငျ မေ့‌လြော့နတေတျသူမြားဖွဈသညျ။ မမှနျသောအစားအသောကျနထေိုငျမှုကွောငျ့ အစာမကွခွေငျးနှငျ့ အစာအိမျပွဿနာမြားကွုံတှနေို့ငျပွီး ကနျြးမာရေးကိုထိခိုကျနိုငျသညျ။
လူလတျပိုငျးအရှယျရောကျသညျနှငျ့ နှလုံးရောဂါဖွဈနိုငျခွေ မွငျ့မားသညျ။ လဖွေတျခွငျး သညျ အခွားအန်တရာယျတဈခုဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျးတို့သညျ အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျးကို ခံစားရလရှေိ့သညျ။ ကနျြးမာရေးအရ အလုပျနဲ့ကနျြးမာရေးကိုခှဲခွားထားရနျ အထူးလိုအပျပါသညျ။
၂၀၂၂ခုနှဈမှာ နှားနှဈဖှားမြား ဘာဖွဈလာမလဲ ?
နှားနှဈဖှားမြားသညျ လာမညျ့နှဈ၂၀၂၂ ခုနှဈအတှငျး အထကျလူကွီးမြား၏ ကူညီစောငျ့ရှောကျခွငျး ခံရပွီး ကံကောငျးသောနှဈတဈနှဈလို့ဆိုရပါပလေိမျ့မညျ။ နစေ့ဉျနတေို့ငျး ဝိုငျးကူပေးမယျ့ သူငယျခငျြးတှအေမြားကွီးရှိမယျ။ ထို့ကွောငျ့ နှားနှဈဖှားမြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ သူငယျခငျြးအားလုံးကို မွတျနိုးသငျ့သညျ။
ယဘေုယအြားဖွငျ့ ပွောရလြှငျ နှားသညျ ယခုနှဈတှငျ ကံကောငျးခွငျးမြားဖွငျ့ မကျြနှာသာပေးမညျဖွဈပွီး အသကျမှေးဝမျးကြောငျးမှု ခြောမှစေ့မေညျဖွဈသညျ။ ကိုယျ့အပျေါမနာလိုသူမနာလိုသူမြားလညျးရှိနသေောကွောငျ့ ဂရုစိုကျသငျ့သညျ။
နှေးထှေးသော 2021 ခုနှဈပွီးနောကျ၊ နှားနှဈဖှားမြား ၏အခဈြဘဝသညျ 2022 ခုနှဈတှငျ အကွီးစားအဆငျ့မွှငျ့တငျရနျ စီစဉျထားသညျ။ တဈဦးတညျးသူ သို့မဟုတျ ခဈြသူရှိပွီးသား နှားနှဈမြား၏အခဈြဘဝသညျ တိုးတကျလာမညျဖွဈသညျ။
ခငျမငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈတယျဆိုရငျ ဒီနှဈထဲမှာ ကတိကဝတျ ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျပွုဖို့ စဉျးစားနိုငျပါတယျ။ မညျသို့ပငျဆိုစကောမူ သငျ့လကျတှဲဖျောအပျေါ ခဈြခွငျးမတ်ေတာသညျ ယခငျကထကျ ပိုမိုပူနှေးလာမညျဖွဈသညျ။
အသကျမှေးဝမျးကွောငျးအလုပျသညျ 2022 တှငျ သငျ့အတှကျ ကံကောငျးဆုံးသောနှဈဖွဈလာမညျဖွဈသညျ။ ၎င်းငျးတို့ကိုယျသငျတငျပွသညျ့အခှငျ့အလမျးမြားကို ရဲရငျ့စှာဆုပျကိုငျနိုငျသရှေ့၊ သငျသညျ 2021 နှငျ့နှိုငျးယှဉျပါက နှဈကုနျတှငျ သငျ့ကိုယျသငျပိုမိုအောငျမွငျလာမညျဖွဈသညျ။
အထူးသဖွငျ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျမြားအဖို့ အလုပျမြားစှာကို အဆကျမပွတျ ခြဲ့ထှငျနမေညျဖွဈပွီး ယခုနှဈတှငျ သငျတှဆေုံ့မညျ့သူမြားကလညျး သငျ့အား ကူညီရနျ အလှနျဆန်ဒရှိမညျဖွဈသညျ။ သငျ့ကံကွမ်မာနှငျ့ ကွိုးစားအားထုတျမှုသညျ သငျ့ကုမ်ပဏီ သို့မဟုတျ အလုပျနရောအတှငျး ပွိုငျဘကျမြား၏ အာရုံစိုကျမှုကို ဆှဲဆောငျနိုငျသညျ၊
သငျ့ဝငျငှနှေငျ့ သငျ့အသုံးစရိတျ နှဈခုစလုံးသညျ ယခုနှဈတှငျ တညျငွိမျဖှယျရှိပွီး 2021 ခုနှဈတှငျ သငျကွုံတှနေို့ငျသညျ့ ငှကွေေးအခကျအခဲကို အလှနျသကျသာရာရစမေညျဖွဈသညျ။
2022 တှငျ သငျ့အား မွငျ့မားသောအဆငျ့မွှငျ့တငျမှုမြားမှ ကူညီပေးသှားမညျဖွဈသောကွောငျ့ သငျ့လုပျငနျးကို ခြဲ့ထှငျရနျ သို့မဟုတျ ယခုနှဈတှငျ ၀ငျငှရေရှိသောလုပျငနျးမြားကို တိုးခြဲ့ရနျ အခှငျ့အရေးရနိုငျမညျဖွဈသညျ
နှားနှဈဖှားတို့၏ရှိရငျးစှဲအားသာခကျြမြားကို လှယျကူစှာထိနျးသိမျးထားရုံသာမက၊ ယခငျက မစဉျးစားထားသောနရောမြားတှငျ အရေးကွီးသောအောငျမွငျမှုမြားကို တှကွေုံ့ရခွငျးဖွငျ့ 2022 ခုနှဈတှငျ ကွီးမွတျသောကံဇာတာရရှိမညျဖွဈသညျ။
အတိတျက ကြောငျးသားကောငျးမဖွဈဖူးသူတှတေောငျမှ နောကျဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ခွလှေမျးကို လှမျးပွီး အသုံးခပြွီး အရငျနှဈတှထေကျ အမြားကွီး ပိုကောငျးတဲ့ ရလဒျတှေ ထှကျလာလိမျ့မယျ။
နှားနှဈဖှားမြား သညျ 2022 တှငျ ပွငျးထနျသောရောဂါမြားမရှိနိုငျတော့ပေ။ သို့သျော သငျသညျ ယခုနှဈမတိုငျမီတှငျ နှလုံးသှေးကွောနှငျ့ ဦးနှောကျသှေးကွောဆိုငျရာရောဂါမြားခံစားရပွီးဖွဈသညျ၊ ဆိုလိုသညျမှာ သငျ့ကနျြးမာရေးကို ဂရုစိုကျသငျ့သညျ။
ဆေးလိပျလြှော့သောကျ၊ အရကျလြှော့သောကျပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးပုံမှနျလုပျပါ။ နှားနှဈဖှားမြား သညျ အဝလှနျခွငျးကို ခံနိုငျရညျရှိသောကွောငျ့ အစားအသောကျကို အလှနျမလေးဘဲ ဂရုစိုကျပွီး အပွငျထှကျသညျ့အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားသငျ့သညျ။
နွားနှစ်ဖွားများ (၁၉၂၅၊ ၁၉၃၇၊ ၁၉၄၉၊ ၁၉၆၁၊ ၁၉၇၃၊ ၁၉၈၅၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၂၁) အတွက် ဟောစာတမ်း
နွားနှစ်သည်တရုတ်ရိုးရာရာသီခွင်ထဲတွင် ဒုတိယမြောက်သောနှစ်ဖွားများဖြစ်လေသည်။ နွားနှစ်ဖွားများသည် အလုပ်များကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရပြီး ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ချီးကျူးခြင်းကို မခံရပေ။
တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် နွားသည်တန်ဖိုးရှိသော တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးတွင် အလုပ်ကြိုးစားပြီး ရိုးသားခြင်း စသော ဝိသေသလက္ခဏာများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။
ကံကောင်းစေသောအရောင် – အပြာ၊ အဝါ၊ အစိမ်း, ကံကောင်းစေသောနံပါတ် – ၁၊ ၄
ကံကောင်းစေသောပန်း – ကြာပန်း, ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန်ကောင်းသောအရပ် – အရှေ့ရပ်၊ အရှေ့တောင်အရပ်
ကြွယ်ဝချမ်းသာစေသောအရပ် – အနောက်မြောက်, အချစ်ကံကောင်းသောအရပ် – တောင်အရပ်
ကံမကောင်းစေသောအရောင် – အနီရောင်၊ အညိုရောင်, ကံမကောင်းစေသောနံပါတ် – ၃၊၆
နွားများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်များ နွားများသည် မိသားစုတစ်စုနှင့် အတူတူ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့သည် ရေရှည်နှင့် တည်ငြိမ်သောအလုပ်ကို ရှာဖွေကြသည်။ နွားနှစ်ဖွားများ၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်အရည်အသွေးများကြောင့် တည်ငြိမ်သောအလုပ်သည် သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
သူတို့သည် ကိုယ်လုပ်သည့်အလုပ်အပေါ် ခိုင်မာသော တာဝန်သိစိတ်ရှိခြင်းကြောင့် ကောင်းမွန်သောရလဒ် ကိုခံစားရနိုင်သည်။ နွားနှစ်ဖွားများတွင် ဆရာဝန်များ၊ ရှေ့နေများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကျောင်းဆရာများအဖြစ်များသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ကြိုးပန်းအားထုပ်မှုများကြောင့် အသိမှတ်ပြူခြင်းကိုခံရသည်။
လယ်ကွင်းထဲတွင် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြေးလွှားနေသော နွားများကဲ့သို့ပင် နွားနှစ်သည် ကျန်းမာ၍ ကြံ့ခိုင်သည်။ ဆေးရုံသို့လာရောက်လည်ပတ်မှုမှာ ရှားပါးသော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ၎င်းသည် ယုံကြည်မှုလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလတွင် လစ်လျူရှုခြင်းသည် နောင်နှစ်များတွင် ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အလုပ်အပေါ်အရမ်းအားရုံစူးစိုက်မှုများသဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံအစားအသောက်ကိုပင် မေ့‌လျော့နေတတ်သူများဖြစ်သည်။ မမှန်သောအစားအသောက်နေထိုင်မှုကြောင့် အစာမကြေခြင်းနှင့် အစာအိမ်ပြဿနာများကြုံတွေ့နိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သည်။
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်ရောက်သည်နှင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်။ လေဖြတ်ခြင်း သည် အခြားအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။ ကျန်းမာရေးအရ အလုပ်နဲ့ကျန်းမာရေးကိုခွဲခြားထားရန် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
၂၀၂၂ခုနှစ်မှာ နွားနှစ်ဖွားများ ဘာဖြစ်လာမလဲ ?
နွားနှစ်ဖွားများသည် လာမည့်နှစ်၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း အထက်လူကြီးများ၏ ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း ခံရပြီး ကံကောင်းသောနှစ်တစ်နှစ်လို့ဆိုရပါပေလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ဝိုင်းကူပေးမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိမယ်။ ထို့ကြောင့် နွားနှစ်ဖွားများသည် ၎င်းတို့၏ သူငယ်ချင်းအားလုံးကို မြတ်နိုးသင့်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရလျှင် နွားသည် ယခုနှစ်တွင် ကံကောင်းခြင်းများဖြင့် မျက်နှာသာပေးမည်ဖြစ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ချောမွေ့စေမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်အပေါ်မနာလိုသူမနာလိုသူများလည်းရှိနေသောကြောင့် ဂရုစိုက်သင့်သည်။
နွေးထွေးသော 2021 ခုနှစ်ပြီးနောက်၊ နွားနှစ်ဖွားများ ၏အချစ်ဘဝသည် 2022 ခုနှစ်တွင် အကြီးစားအဆင့်မြှင့်တင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ တစ်ဦးတည်းသူ သို့မဟုတ် ချစ်သူရှိပြီးသား နွားနှစ်များ၏အချစ်ဘဝသည် တိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။
ခင်မင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ကတိကဝတ် ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ပြုဖို့ စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သင့်လက်တွဲဖော်အပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ယခင်ကထက် ပိုမိုပူနွေးလာမည်ဖြစ်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်သည် 2022 တွင် သင့်အတွက် ကံကောင်းဆုံးသောနှစ်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကိုယ်သင်တင်ပြသည့်အခွင့်အလမ်းများကို ရဲရင့်စွာဆုပ်ကိုင်နိုင်သရွေ့၊ သင်သည် 2021 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက နှစ်ကုန်တွင် သင့်ကိုယ်သင်ပိုမိုအောင်မြင်လာမည်ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအဖို့ အလုပ်များစွာကို အဆက်မပြတ် ချဲ့ထွင်နေမည်ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ်တွင် သင်တွေ့ဆုံမည့်သူများကလည်း သင့်အား ကူညီရန် အလွန်ဆန္ဒရှိမည်ဖြစ်သည်။ သင့်ကံကြမ္မာနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည် သင့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အလုပ်နေရာအတွင်း ပြိုင်ဘက်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်နိုင်သည်၊
သင့်ဝင်ငွေနှင့် သင့်အသုံးစရိတ် နှစ်ခုစလုံးသည် ယခုနှစ်တွင် တည်ငြိမ်ဖွယ်ရှိပြီး 2021 ခုနှစ်တွင် သင်ကြုံတွေ့နိုင်သည့် ငွေကြေးအခက်အခဲကို အလွန်သက်သာရာရစေမည်ဖြစ်သည်။
2022 တွင် သင့်အား မြင့်မားသောအဆင့်မြှင့်တင်မှုများမှ ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်လုပ်ငန်းကို ချဲ့ထွင်ရန် သို့မဟုတ် ယခုနှစ်တွင် ၀င်ငွေရရှိသောလုပ်ငန်းများကို တိုးချဲ့ရန် အခွင့်အရေးရနိုင်မည်ဖြစ်သည်
နွားနှစ်ဖွားတို့၏ရှိရင်းစွဲအားသာချက်များကို လွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းထားရုံသာမက၊ ယခင်က မစဉ်းစားထားသောနေရာများတွင် အရေးကြီးသောအောင်မြင်မှုများကို တွေ့ကြုံရခြင်းဖြင့် 2022 ခုနှစ်တွင် ကြီးမြတ်သောကံဇာတာရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အတိတ်က ကျောင်းသားကောင်းမဖြစ်ဖူးသူတွေတောင်မှ နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းကို လှမ်းပြီး အသုံးချပြီး အရင်နှစ်တွေထက် အများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ထွက်လာလိမ့်မယ်။
နွားနှစ်ဖွားများ သည် 2022 တွင် ပြင်းထန်သောရောဂါများမရှိနိုင်တော့ပေ။ သို့သော် သင်သည် ယခုနှစ်မတိုင်မီတွင် နှလုံးသွေးကြောနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများခံစားရပြီးဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်သင့်သည်။
ဆေးလိပ်လျှော့သောက်၊ အရက်လျှော့သောက်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပါ။ နွားနှစ်ဖွားများ သည် အဝလွန်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် အစားအသောက်ကို အလွန်မလေးဘဲ ဂရုစိုက်ပြီး အပြင်ထွက်သည့်အခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားသင့်သည်။
Total Hits : 333179